Cusboonaysiin:Al-Shabaab oo ka baxay degmada Ceel-waaq oo ay saakay qabsadeen. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Sep 16, 2017
Cusboonaysiin War: Ciidamada amaanka maamulka Jubbaland ayaa dib ugu laabtay degmada Ceel-waaq ee gobalka Gedo, ka dib markii ay halkaasi ka baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Ciidamada Daraawiishta Jubbaland ayaa si nabad galyo ah ugu laabtay degmadaasi oo ay saacado badan ku sugnaayeen Al-Shabaab oo dagaal ku qabsaday, waxaana la sheegay in Al-Shabaab ay halkaasi ka afduubteen Sarkaal ka tirsan Jubbaland iyo dad kale oo Shacab ah.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay halkaasi ka wateen Gawaari Nuuca dagaalka ah agabyo kale oo ay la haayeen Ciidanka Jubbaland, waana markii labaad ay Al-Shabaab todobaad gudahiis weerar ku qaadaan degmooyin ka tirsan gobalka Gedo.
Dagaalkii saakay ka dhacay degmada Ceel-waaq ayaa ku soo beegmaya, iyadoo uu gobalka Gedo ku sugan yahay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe”
Xaaladda ayaa hada caadi ku soo laabtay, waxaana si buuxda u maamulaya Magaaladda Ciidanka Daraawiishta Jubbaland.
Ciidamo ka tirsan Xarakada AL-shabaab ayaa saak dagaal kula wareegay degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo,iyada oo Ciidamada dowladda ee ku sugnaa Magaalada ay u baxsadeen dhinaca dalka Kenya.
Al-shabaab ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday Ceelwaaq,waxaana jira warar sheegaya in Ciidamada Al-shabaab markii ay qabsadeen Magaalada ay bur buriyeen Xarunta degmada iyo Saldhigga Booliska ee Ceelwaaq.
Miinooyin ayaa la sheegayaa in ay ku xir xireen dhismaha maamulka iyo Saldhigga kaddibna sidaas ku qarxiyeen,iyada oo gabi ahaan dhulka la dhigay dhismayaashii.
Alshabaab markii ay la wareegeen Magaaladda waxay isugu yeereen Dadka Deegaanka, iyagoo u jeediyay Khudbad, ugana digay inay la macaamilaan Ciidamadda Dowladda Somalia.
Ciidamad dowladda ayaa u baxsaday dhnaca dalka Kenya,iyada oo kuwo kalena ay dhinaca Itoobiya aadeen sida ay wararku sheegayaan.
Al-shabaab ayaa todobaadkii hore dagaal kula wareegay magaalada Baladxaawo inkasta oo ay saacado kaddib isaga tageen,waxaana Magaaladaas hadda ku sugan Madaxweynaha jubaland, Axmed Madoobe iyo Wafdi uu hoaaminayo.